Shina Telo metatra herinaratra elektronika fatra （mitondra, lora, gprs） mpanamboatra sy mpamatsy | famonjena
Drafitra elektrika tokana elektrika tokana module ic card + module）
Faritra iray angovo metatra mahery （lavitra）
Mira-tariby telo-dingana / telo-dingana telo-tariby telo metatra fehezin'ny sisintany miampy lehibe ary mampiasa boribory fandrefesana angovo avo lenta. Ny fahaizan'ny serivisy mifehy sy ny fahatokisana azy dia nahatratra ny fampiharana be dia be ihany koa. Mampifanaraka ny teknolojia fanodinana sampana nomerika sy ny fizotran'ny SMT, ary namboarina sy novolavolaina araka ny fanjifana herin'ireo mpampiasa indostrialy.
1. Afo-mandry, mora apetraka
2. Miasa ny fandrefesana angovo mavitrika sy reaktif, afaka mampiseho fotoana, code famantarana fanairana, sns.
3. Amin'ny alàlan'ny fanokafana ny rakitsoratra, dia azo angatahana hisorohana ny fangalarana herinaratra.
4. Ny metaly angovo dia manana fiasan'ny tarif marobe (tahan'ny fatra)
5. Fomba fanaraha-maso lavitra sy aloa eo an-toerana
6. fomba fiadian-kevitra: RS485, infarramed
7. Manana ny asan'ny manadio ny metatra, izay mety sy mora ampiasaina.
8. Ny onjam-pitaterana dia mifandray amin'ny alàlan'ny tamba-jotra herinaratra tsy mila misintona tariby hafa.
1.Mampiseho miaraka amin'ny fampisehoana LCD miaraka amin'ny zoro fijerena malalaka ary ny mifanohitra avo
2.Mampiasa teknolojia fanodinana dizitaly sy fizotran'ny SMT.
3.Voltage sampling loop dia manamafy ny fizarana fanoherana fanoherana
4. Ny fiasa lehibe: fandrefesana sy ny fanaraha-maso, ny fanaraha-maso ny saram-bidy lavitra, ny fanamarinana ny fiarovana ary ny encryption, ny fampisehoana, ny firaketana hetsika, ny famoahana ny fotoana, ny famoahana pulse, sns.
5. Modely varahina miendrika varahina sy NB modely:
Ny ankehitriny dia manisy fehin-kibo miaraka amin'ny shunt varahina manganoka miorina amin'ny laoniny sy maharitra.
Modules NB: Fifandraisana serasera IoT, fanjifana herinaratra ambany. Manohana fifandraisana manara-penitra ho an'ny fitaovana manana fepetra fifandraisana fifandraisana avo lenta
6. Modul amin'ny serivisy: Mifampiresaka amin'ny alàlan'ny tambajotra andalana herinaratra nefa tsy mila tariby fanampiny.
Lora module: Fifandraisana serasera tsy misy fetra lavitra.
Module GPRS: tambajotra finday ho an'ny daholobe (tambajotra 2G).
7.Safidy fifidianana sy fomba fiasa: karatra CPU / logiciel lozisialy / karatra SD. RS485, tsy miorina, mpanondrana herinaratra
8. Fampahalalana momba an-tsary: ​​ny fanjifana herinaratra mitombo mandritra ny volana sy ny volana lasa teo, ny mari-pamantarana herinaratra ho an'ny herinaratra sy ny sandan'ny fanamafisana ny angovo herinaratra, daty sy ora ankehitriny, code na fampandrenesana fanairana, fehezin'ny fifampiresahana, laharana metatra herin'ny herinaratra. etc.
9. Masam-bokatra metaly sy NB mody: Ny takelaka metering dia ampiasaina handrefesana ny hery mavitrika bidirectional sy angovo efatra-quadrant. Ny fantsom-bolan'ny trafitra volavolan-tena dia manamafy ny fizarana volena fanoherana.
Ny fidirana mivantana amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana na karazana fidirana mpanova, fidirana opération-switch-in
switch switch-in: miniature circuit breaker switch dia napetraka ao anaty metatra, ary mitambatra ny metatra, tombony: rafitra tsotra sy vidiny mora
11.Fampiasa asa-mihodina ivelany
Safidy fidirana mivantana na karazana fidirana mpanova, opération opération-switch external
mifamadika ivelany: napetraka mitokana ny takelaka miniatur, ny metaly herinaratra dia mifehy ny fisokafana / ny fanakatonana ny mpanodidin'ny faritra ivelany amin'ny alàlan'ny terminal control
tombony: lozam-pifamoivoizana ivelany, fanelingelenana matanjaka ankehitriny, tsy mora manimba.
Volavolan-kevitra miresaka 3 × 220 / 380V
Ny fanombatombana ankehitriny 3 × 1.5(6)A, 3 × 5(20)A, 3 × 10(40)A, 3 × 5(60)A, 3 × 20(80)A
Haavo voamarina Ambaratonga mavitrika 0.5, ambaratonga 2, 0.5seconds / andro
Fanjifana herinaratra Tsipika fambara: <= 1.5W, 5VA; andalana ankehitriny: <1VA
Salan'ny mari-pana Ny elanelana fiasana -25 ~ 55degree, fitomboan'ny hafanana miasa -40 ~ 70 degre
Communication RS485: 2400bps Infrared: 1200bps DL / T645-2007
-Modely fampifandraisana an-tariby-
Amboary ny vata herinaratra amin'ny boaty metatra, ary ampifandraiso ny interface tsara arakaraka ny sary an-tariby. Entina ny mampiasa tariby varahina na varahina halimo. Ny kofehy amin'ny vata fitaterana dia tokony hikatona mba tsy handoro noho ny tsy fahampian'ny fifandraisana na ny tariby manify loatra.
Previous: Metatra angovo elektronika tokana
Manaraka: Momba ny angovo elektronika dingana telo
Métera angovo nomerika telo
Meteran'ny elatra elektrika telo
Meteran'ny angovo telo
Ny karatra fiatrehana fahaiza-miampy telo ambaratonga telo
Miorina ho an'ny angovo telo Phase Smart Energy